Vanhu 8 vakaurayiwa mutsaona yendege yeRussia An-72 muCongo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Vanhu 8 vakaurayiwa mutsaona yendege yeRussia An-72 muCongo
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • DR Congo Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Yakagadzirwa neRussia An-72 ndege yekufambisa yakarova mu Dhemokiratiki Ripabhuriki yeKongo.
Mutori venhau weEmbassy yeRussia muCongo akataura kuti vagari veRussia vaive pakati pevashandi vendege. Sekureva kwake, embassy yave kujekesa mazita evakakuvadzwa.
Pakutanga, vezvenhau veDRC vakataura kuti ndege yeAn-72 yakadonha kuchamhembe kwenyika. Ndege iyi yaibhururuka kubva kuGoma airport kuenda kuKinshasa, asi mushure meawa imwe iri mumhepo, yakamira kutaura nenzvimbo yekudzora ndege uye yakanyangarika kubva kumaradhi skrini. Emergency services yakazosimbisa kuparara kwendege.
Ndege inotakura zvinhu yanga yakatakura vafambi vasere nevashandi, kusanganisira vehutungamiriri veDRC.